Hezekile 10 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
10 Ndaqhubeka ke ndibona, khangela! phezu kwesibhakabhaka+ esasiphezu kwentloko yeekherubhi kwakukho okuthile okunjengelitye lesafire,+ njengembonakalo yokuthile okufana netrone,+ kubonakala ngaphezu kwazo.
2 Wathetha kwindoda eyambethe ilinen,+ wathi: “Ngena ngaphakathi kwamavili ajikelezayo,+ phantsi kweekherubhi, uze uzalise umphakathi wezandla zakho zozibini ngamalahle+ omlilo aphakathi kweekherubhi, uwaphose phezu kwesixeko.”+ Ngoko yangena phambi kwamehlo am.
3 Iikherubhi ke zazimi ngasekunene kwendlu ukungena kwendoda leyo, laza ilifu layizalisa intendelezo engaphakathi.+
4 Baphakama ke ubuqaqawuli bukaYehova+ busuka ezikherubhini baya embundwini wendlu, yaye indlu yazaliswa lilifu,+ nentendelezo yayizaliswe bubuqaqawuli bukaYehova.
5 Nesandi eso samaphiko eekherubhi+ savakala kwintendelezo engaphandle, sinjengesandi sikaThixo uSomandla xa ethetha.+
6 Kwathi ke, xa wayalela indoda eyambethe ilinen, esithi: “Thabatha umlilo phakathi kwamavili ajikelezayo, phakathi kweekherubhi,” yangena yaza yema ecaleni kwevili.
7 Yandula ke ikherubhi yolula isandla sayo phakathi kweekherubhi yasisa emlilweni+ owawuphakathi kweekherubhi+ yawuthabatha yaza yawubeka kumphakathi wezandla zalowo wayambethe ilinen,+ yena ke wawuthabatha waza waphuma.
8 Kwabonakala ke ezikherubhini imbonakaliso yesandla somntu wasemhlabeni phantsi kwamaphiko azo.+
9 Ndaza ndaqhubeka ndibona, khangela! kwakukho amavili amane ngasezikherubhini, ivili elinye lingakwikherubhi enye nelinye ivili lingakwenye ikherubhi,+ nembonakalo yamavili ngathi kukubengezela kwelitye lekrizolite.
10 Ngokwembonakalo yawo ke, omane ayefana, kanye njengokungathi ivili liphakathi evilini.+
11 Ekuhambeni kwazo, zazihamba ziye kumacala azo omane. Zazingajiki ekuhambeni kwazo, ngenxa yokuba indawo ebijonga kuyo intloko, ayehamba elandela yona. Zazingajiki ekuhambeni kwazo.+
12 Nayo yonke inyama yazo nemihlana yazo nezandla zazo namaphiko azo namavili ayezaliswe ngamehlo macala onke.+ Zone zazinamavili azo.
13 Ke wona amavili, kwabizwa ezindlebeni zam kwathiwa, “Owu mavilindini!”
14 Yaye nganye yayinobuso obune.+ Ubuso bokuqala yayibubuso bekherubhi, ubuso besibini yayibubuso bomntu wasemhlabeni,+ obesithathu yayibubuso bengonyama, obesine yayibubuso bokhozi.+
15 Zaziye ziphakame ke iikherubhi+—yayisisidalwa esiphilayo esikwasinye endasibona ngakuMlambo iKebhare+—
16 yaye ekuhambeni kweekherubhi, amavili ayehamba ecaleni kwazo;+ xa iikherubhi ziphakamise amaphiko azo ukuba abe ngaphezu komhlaba, amavili ayengajiki, nawo ngokwawo, ecaleni kwazo.+
17 Xa zisima ngxi, ayesima ngxi; naxa ziphakama,+ ayephakama nazo, kuba umoya wesidalwa esiphilayo wawukuwo.+
18 Baza ubuqaqawuli+ bukaYehova basuka embundwini wendlu bema ngxi phezu kweekherubhi.+
19 Zawaphakamisa ke ngoku iikherubhi amaphiko azo zaza zaphakama emhlabeni+ phambi kwamehlo am. Ekuhambeni kwazo, namavili ayesecaleni kwazo ngokusondeleyo; zaza zema ngasesangweni lendlu kaYehova ngasempuma, yaye ubuqaqawuli bukaTHIXO kaSirayeli babuphezu kwazo, ngaphezulu.
20 Esi sisidalwa esiphilayo+ endandisibone phantsi koTHIXO kaSirayeli ngakuMlambo iKebhare,+ ukuze nje ndazi ukuba yayiziikherubhi.
21 Zizone nje, nganye kuzo yayinobuso obune+ yaye nganye yayinamaphiko amane, nokuthile okufana nezandla zomntu wasemhlabeni kwakuphantsi kwamaphiko azo.
22 Ke yona imbonakalo yobuso bazo, yayifana naleyo ndayibonayo ngakuMlambo iKebhare.+ Zazihamba ngqo iyileyo isiya phambili.+